Ungakhetha kanjani amagama angukhiye we-niche empeleni ama-Amazon?
Into yukuthi kunezinhlanzi eziningi ze-Amazon - futhi zonke zizungezile. Kodwa uma ufuna ukwenza inzuzo yangempela lapho, kuzodingeka uqalise ucwaningo oluthile lokucwaninga elingukhiye, ngokuhambisana nokuqinisekiswa kwe-niche okuhloswe kahle okudingeka kutholakale kuphela amagama angukhiye aphezulu wokuwina ama-Amazon. Yingakho kuzodingeka wazi ukuthi ungathola kanjani izigqoko zegolide eziyigugu kakhulu nezingavamile ezibonwe laphaya - pointeuse empreinte digital edge. Qaphela, ukuthi ukuqinisekisa ukuthi amagama akho angokhiye we-niche aphezulu angakwazi ukuwina, uzodinga ukugxila ikakhulukazi kulawo ma-ecommerce niches kanye nemikhiqizo engachazwa ngokucacile njengenzuzo egcwele. Khumbula, kubaluleke kakhulu ukuthi ube nephuzu elifanele lokuqala nanoma yikuphi, ngisho nohambo oluthembisayo lokuthengisa, ukuzibona phakathi kwamabhizinisi okuhola nokuhamba phambili okuphumelelayo ekuthumeni e-Amazon.
Yini eyenza ama-Niche angakusiza ama-Amazon?
Lokhu kungukuthi akukho-brainer, kodwa mhlawumbe noma yini ekulethela imali ingabizwa inzuzo, akunjalo? Futhi kusukela kumbono we-Amazon, leyo ncazelo ecacile futhi elula kufanele ibuyekezwe nje ngesimo esisodwa esisodwa - ukuthola i-niche enenzuzo kakhulu e-Amazon kusho ukuthi kulindeleke ukuba ulethe isabelo sezingonyama sezinzuzo eziphelele ozilindele kusuka lapho - esikhathini esifushane kungenzeka.
Ingabe i-niche yakho engaba khona ingabe inzuzo ngempela?
Indlela yokuqonda ukuthi usuvele usendaweni efanele ukuze ukwazi ukuqhubeka nokuhlola amagama akho angukhiye angcono kakhulu e-Amazon? Eqinisweni, awukwazi nje ukubiza ukuthi i-niche ibonakala inenzuzo, uma okutholakele kwakho kususelwe, isibonelo, kuphela kwimiphumela yokusesha ekholisayo, kanye nemali ecebile kakhulu yemikhiqizo etholakala ngamabhakede angaphezu kwenkulungwane. Lokhu ngeke kube okwanele ngoba kuzodingeka ukuthi okungenani iningi lamachashazi (uma kungenjalo wonke) lixhunyiwe kahle ngaphandle kokuthi ufuna ukuchitha isikhathi sakho nomzamo wakho. Yilokho kuphela. Ngakho-ke, lapho ufuna ama-key e-niche angama-Amazon, ungcono ucabangele uhlu olulandelayo lwamaphuzu amaphuzu. Ukuze uthole amathuba aphezulu ekutholeni ama-key we-niche e-Amazon ngempela, qiniseka ukuthi uyayenza endaweni efanele.
Okufanelekile, ukusebenza jikelele kwe-niche kufanele kuhlanganise izici ezilandelayo:
ivolumu yokucinga ephakeme kakhulu.
Ngokuqhubekayo ukuthuthukisa ukunyuka okuphezulu kwevolumu yokucinga.
ukuncintisana kwezinga le-Google elingenamkhawulo noma elincane.
Umkhiqizo utholakala ngemali enkulu.
Kuningi lokubuyekezwa kwamakhasimende okwenziwe ngento ngayinye ehlinzekwa laphaya.
Kuzo zonke, amathegi wamanani aphezulu kufanele abe ngaphezulu kakhulu.
Isikhathi eside sokuphila kwemikhiqizo ngaphandle kokugcinwa okunzima noma imisebenzi edingekayo.
Inani elanele lamagama angukhiye omthengi anikezela isikhala esanele sokuthutha okulandelayo.